"Azazel" - को गुप्तचर Erast Fandorin पहिलो छानबिन बारेमा एक उपन्यास
काम Borisa Akunina (Grigory Chkhartishvili) मा "Azazel" कलिलो गुप्तचर Erast Fandorin गर्न पाठक परिचय। मुख्य पात्र को लेखक रूपमा पछि उपन्यास मा अनुसन्धानहरूले धेरै रहस्यमय र खतरनाक साहसिक प्रतीक्षा हुनेछ। Fandorin यसलाई पहिले नै आयोजित प्रकट र प्रसिद्ध मास्टर गुप्तचर, र उहाँले धेरै युवा र अपराध अनुसन्धान को खतरनाक संसारमा सामना पहिलो पटक थियो, जबकि।
द्वारा पाठकहरूलाई र दर्शकहरूलाई वर्ण प्रेम
पहिलो जटिल मामला मा Erast Fandorin ऐतिहासिक जासुस "Azazel" मा narrated छ। पुस्तक, जो एक सारांश एक पटक पाठकहरूलाई लाखौं द्वारा प्रेम, तल वर्णन गरिनेछ। तिनीहरूले अचम्मको कथाहरू गुप्तचर Fandorin को लडी अगाडी देख थिए। अविश्वसनीय जटिल अपराध, को गुप्तचर Erast Fandorin र छानबिन को विशेष तरिका समर्पित गर्ने उपन्यास मा वर्णन पूर्णतया लेखक द्वारा सिर्जना संसारमा आफूलाई डुबाउनुहोस् गर्न पाठक करमा पार्दछ। 2002 मा, "Azazel" - एक जवान गुप्तचर को छानबिन बारेमा पहिलो उपन्यास - खिच्नुभयो थियो, र वर्ण Erast Fandorin पनि थप प्रशंसक पायो। तसर्थ, समय 2005 मा ठूलो स्क्रीन, "टर्की Gambit" र "राज्य सभासद," दर्शक तिनीहरूले आफ्नो मनपर्ने नायक र आफ्नो अविश्वसनीय रोमांचक संग पूरा हुनेछ भनेर थाह थियो।
Erast Fandorin संग Familiarity
"Azazel" - एक उपन्यास घटना 1876, मा मास्को गर्न पाठक ल्याउँछ जो जहाँ गुप्तचर Erast Fandorin को रोमांचक समर्पित श्रृंखला को protagonist संग पहिलो बैठक। बाँकी एक अनाथ, जवान Fandorin, उत्कृष्ट शिक्षा र महान मूल बाबजुद, जीवित कमाउन बाध्य। जवान मानिस मास्को कर्मचारी गुप्तचर नियन्त्रणमा काम। साहसिक र प्रहरी सेवा सम्बन्धित जटिल अवस्थामा को आशा विपरीत, को युवा घरेलु हिंसा अपराध सामना गर्न, र त्यसपछि अर्को, प्रहरी को श्री प्रमुख सबै दिन प्रदर्शन सुलेखन रिपोर्ट।
वर्तमान मामला अघिबाटै जान्ने काम मा
आफ्नो सल्लाहकार, को अनुसन्धान प्रहरी अधिकारी Ksaveriy Feofilaktovich Grushin, एक जवान मानिसले आफ्नो इच्छा को प्राण मा हाँसेको को बुबाको हेरविचार एक प्रसिद्ध गुप्तचर बन्न। र मास्को मा अवस्थामा लिन जहाँ, Fandorin संलग्न जो चाहनुहुन्छ छानबिन? कि व्यापार पीटर्सबर्ग, त्यहाँ अपराध र गुप्तचर poobrazovanney pomasshtabnee र अनुसन्धानहरूले उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग संग बाहिर छन्। सायद सपना Erast Petrovich उल्लेखनीय गुप्तचर बन्न र सफल होला, तर "Azazel" - उपन्यास मात्र पहिलो बारेमा, तर पनि, सायद, यो गुप्तचर Erast Fandorin को जीवन मा निर्णायक वास्तवमा बारेमा। भाग्य पहिलो नजर, आत्महत्या पिएको र extravagant जवान मा, एक सरल अनुसन्धान नायक फाले। भयानक रहस्य र खतरनाक रोमांचक एक कोरिएको श्रृंखला को मामला को अध्ययन।
एक नायक बन्ने
को तार को हो जो मामला, को छानबिन समयमा संसारको षडयंत्र, Erast Fandorin को venerable महानगरीय गुप्तचर Briling फेला परेन। जटिल अपराध को पीटर्सबर्ग आदेश मा छानबिन नेतृत्व गर्न नियुक्त यो, extravagant रोचक र शिक्षित मानिस गुप्तचर जस्तै Fandorin को गठन, प्रभावित। आनन्द संग Erast को बेहोरा र मालिक को विधिहरू हेर्दै र वरिपरि उहाँलाई पछ्याउन खोज्छ।
परिवर्तन र प्रसिद्ध गुप्तचर मा एक अनुभवहीन प्रहरी अधिकारी देखि गर्नाले, आफ्नो गल्ती नायक सिक्न कसरी बुझ्न गर्न, पाठ्यक्रम, "Azazel" पढ्नुपर्छ। रोमन, अब तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ जो एक सारांश, अविश्वसनीय रोचक छ।
पछि काम मा, पाठक एक पूर्ण फरक Fandorin पूरा गर्दछ। जसको लोकप्रियता आलोचकहरु प्रसिद्ध Sherlock होम्स तुलना हुनेछ रूसी गुप्तचर, पछि, एकैचोटि हुनेछ। सुरुमा उहाँले खोल्ने षड्यन्त्र कोड-नाम "Azazel" समयमा भयो कि घटनाहरू बाँच्न हुनेछ। उपन्यास तिनीहरूलाई जवान नायक को मात्र रूपमा खतरनाक र रोमाञ्चक साहसिक वर्णन, तर दुःखद परिस्थिति को एक श्रृंखला रूपमा, सधैंभरि आफ्नो जीवन परिवर्तन भयो। सफलता को मूल्य Fandorin लागि पनि उच्च छ, र उपन्यास को अन्त्यमा पाठक पहिलो यो गुप्तचर को पहिचान पछि हुनेछ जो छवि, यो देख्नुहुन्छ।
"Azazel" (पुस्तक): समीक्षा
पाठकहरूका आधुनिक लेखन शैली Borisa Akunina लागि असामान्य याद गर्नुहोस्। आफ्नो काम तपाईं उन्नाइसौँ शताब्दीको क्लासिक पढ्न भनेर छाप छोड्न। के भइ रहेको छ को विवरण, बोलीको तथ्याङ्कले वर्णन गर्न प्रयोग - सबै राम्रो भ्रम पक्षमा बताइएको छ। एक आकर्षक कहानी उल्लेख, "Azazel", उपन्यास रेभ समीक्षा छ, हुनत धेरै अन्त उत्पादनमा घटनाहरूको दुखी दुःखद पालो हो। तर यस्तो कुल वर्ण Erast Petrovich Fandorin कि रहस्यमय प्राप्त गर्न सक्छ र त्यो पाठक यति रुचाउनु छ जसको लागि एक चुम्बकीय अपील, छैन?
"Azazel" को एक स्क्रीन मिलाइएको (निर्देशक अलेक्जेन्डर Adabashyan)
माथि उल्लेख रूपमा, 2002 मा उपन्यास एउटा चलचित्र मा गरिएको थियो। संदेह आलोचकहरु, फिलिम र नेतृत्व अभिनेता विपरीत समय को वातावरण, वर्णहरू को प्रकृति र उपन्यास मा वर्णन घटनाहरूको रहस्य व्यक्त गर्न व्यवस्थित। यस साईट गुप्तचर को भूमिका Fandorin एक युवा अभिनेता इल्या Noskov प्ले। हुनत कास्टिक प्रेस उहाँले पृष्ठभूमिमा सर्गेई Bezrukov, brilliantly को charismatic Briling, उपन्यास पढ्न भएकाहरूलाई मुख्य पात्र र उहाँले सुरुमा केही व्यक्तित्व लक्षण आफ्नो विशेषता पछि भएका छन् कि छैन याद हुनेछ खेलेका हराएको थियो उल्लेख गरे। आखिर, यो Fandorin मा Brilling एक महत्वपूर्ण प्रभाव थियो, त्यसैले हामी इल्या Noskov एकदम जवान Erast Petrovich को मूर्तिलाई conformed भनेर भन्न सकिन्छ।
फिल्म पनि मेरिना Neyolova, ओलेग Basilashvili, मेरिना Alexandrova जस्तै जस्तै प्रमुख रूसी अभिनेता ताराहरु।
सार "Matryona", Solzhenitsyn को कथा
ए Chekhov, "घाँटी मा अन्ना": कहानी को एक सारांश
एक वास्तविक हाते झोला प्रादा कसरी भेद गर्न? सुझाव
सारांश। "भोज वा अनिकालमा": लडाई वा अधीनमा?
Russules मसालेदार: नुनीन बनान मशरूम लागि नुस्खा
बचत बैंक मा बंधक को नियम र यसको डिजाइन को peculiarities
समीक्षा, अनुप्रयोग सुविधाहरू, प्रदर्शन, र संरचना: खण्डका चिह्न "9 महिना" को लागि क्रीम
मशरूम संग सलाद: स्वादिष्ट नुस्खा फोटो
स्थानीय माग रूपमा अर्थव्यवस्था असर?